नेपाल–भारत वाणिज्य बैठक आजदेखिः के-के छन् एजेन्डा ? – Makalukhabar.com
नेपाल–भारत वाणिज्य बैठक आजदेखिः के-के छन् एजेन्डा ?
मकालु खबर	 २०७५ माघ २४ गते प्रकाशित 31 0
काठमाडौं। नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरवलोकनसम्बन्धी दोस्रो सहसचिवस्तरीय बैठक बिहीबारदेखि पोखरामा हुँदै छ। बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ। पहिलो बैठक भारतको दिल्लीमा गत साउनमा भएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार बैठकको नेतृत्व मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव सैंजूले गर्नेछन्। सहसचिव सैंजूका अनुसार पोखरामा हुने दोस्रो चरणको बैठकमा मुख्य गरी व्यापार अवरोधका रूपमा देखापरेको गैरकर हटाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
भारतले नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न दिने सुविधा दिने भनिए पनि विभिन्न शीषर्ककमा अतिरिक्त कर लगाउँदै आएको छ।
जुटमा लगाउँदै आएको काउन्टर भेलिङ डयुटीका कारण निर्यातमा समस्या आएको छ। कृषि उत्पादन अदुवा, अलैंची, जुटलगायतमा क्वारेन्टाइन परीक्षणदेखि निकासीमा आउने समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमासमाधान गर्ने विषय पनि छलफलमा राखिनेछ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुमा भारतीयले लगाउने शुल्ककै हाराहारीमा भारतबाट आयात हुने वस्तुमा पनि शुल्क लगाउने विषय नेपालले उठाउने तयारी गरेको छ। यसैगरी नेपाली वस्तुको बजारीकरणका लागि भारतले भित्री बजार उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
भारत निकासी हुने केही कृषिजन्य उत्पादनको हकमा ड्युटी फ्री सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, तरकारी, घिउ, तामाका भाँडाकुडा, जिंक अक्साइडमा भारतले निर्धारण गरेको कोटा प्रणाली हटाउनुपर्ने मुद्दा पनि नेपालले बैठकमा राख्ने भएको छ। सैंजूका अनुसार रेल्वे, वाटरवे र रोडवेलगायत कनेक्टिभिटीका बारेमा छलफल गरिनेछ।
बाजुरामा पुनः हिमपात, जनजीवन फेरि कष्टकर